HTC U11 Life, ngwaike ekwentị a agbapụtala | Androidsis
HTC U11 Ndụ, ngwaike nke ekwentị a leaks
Agbanyeghị, dịka a tụrụ anya ya, HTC U11 abụghị ekwentị kacha ere n'ahịa, ihe doro anya bụ na ọ bụ otu n'ime ọdụ kacha ọhụrụ. Anyị anọwo na -anụ maka ụdị decaffeinated ruo ogologo oge, faịlụ Ndụ HTC U11, ugbu a, ọ bụrụla eziokwu.
Ngalaba telivishọn nke onye nrụpụta Taiwanese anaghị agafe oge kacha mma, mana HTC na -aga n'ihu ịkụ nzọ n'ahịa a site na iji ụzọ ọhụrụ na -agbanwe agbanwe. Anyị nwere ihe atụ ọhụrụ na ndụ HTC U11 a.
Ndị a ga -abụ njirimara teknụzụ nke HTC U11 Life
Ma ọ bụ Portal Njikwa gam akporo onye na -ahụ maka inyocha ozi gbasara ekwentị HTC ọhụrụ. N'ihe gbasara HTC U11 Life, onye aha ya bụ HTC Ocean, ga -ahụ ọkụ tupu ngwụcha afọ a.
Na mgbakwunye na igosi HTC U11 Ndụ imeweGuysmụ nwoke sitere na Android Authority ebipụtala njirimara teknụzụ niile nke ekwentị, nke dịka nwanne ya nwoke nke tọrọ ya ga -eguzogide mmiri na uzuzu n'ihi asambodo IP67 ya.
Dịka ị ga -ahụ na onyonyo nke na -eso ahịrị ndị a, HTC U11 Life ga -enwe ụdị yiri nke nwanne ya nwoke nke tọrọ ya, gụnyere akụkụ ndị ahụ na -enwe mmetụta nrụgide. Banyere njirimara teknụzụ, anyị na-ahụ ihuenyo nke otu IPS 5.2-inch nke ga-erute mkpebi HD zuru oke.
HTC U11 Life, nke ga -enwe ihe mmetụta mkpịsị aka, ga -enwe 16 megapixel n'ihu igwefoto nwere teknụzụ "Panorama Selfie" nke ga -amasị ndị hụrụ selfie n'anya. Igwefoto n'azụ ya ga -enwe otu megapixels 16 nke mkpebi.
N'okpuru mkpuchi nke HTC U11 Life a na -atụ anya processor Qualcomm Snapdragon 630 yana 4 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa dị n'ime na anyị nwere ike gbasaa site na oghere kaadị micro SD ya ruo 2 TB. Fọrọ nke nta ihe ọ bụla.
N'ikpeazụ rịba ama na ekwentị ga -enwe ụfọdụ Igwe isi U-Sonic, yabụ anyị nwere ike chefuo ịchọta jakị 3.5 mm maka ekweisi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC U11 Ndụ, ngwaike nke ekwentị a leaks
A ga-enyocha nhazi atụmatụ nke Xiaomi Mi MIX 2